Oromo Views & Headline News: Open Letter to UNHCR
Hayyee Yaa Oromoo,
Gochaan kuni daran nama gaddisiisa, Genocide irraa adda miti. Hagam akka Tigreen Sanyii oromoo lafa irraa dhabamsiisuuf akka hojjataa jitu mull'isa. Garuu, Diina irraa maal eegu? Hardha kana taane jennee iyyuun gatii hin qabu. UNHCR dhiistanii osoo waaqatti iyyattanii iyyuu waanti dhufu hin jiru. Sodaattuu duruu reebu, ajjeesu, kkf. Yoo onnee qabaannee fi warra kaayyoo taane hojii dhaan haa deebisnu. Adaraa keessan kana taane sana taane jettanii halkanii fi guyyaa hin bo'inaa. Raadiyoo SBO dhaanis gochaa wayyaanee nutti hin odeessinaa. Gumaa keenya qofa deebisuuf haa hojjannu, Oduu fi bo'ichi bu'aa fide hin agarre.
Dhiigi Oromoo, dhiiga Tigree dangalaasuun deebii argata!!
Kun dhugumatti waan hedduu nama gaddisiisaa ti. Wayyaaneen daangaa dabartee Oromoota tokko tokkoon ukkaamsuu fi ajjeesuu irra tartee jumlaan akkanatti fixuun balaaleefatamu qaba. Ilmaan oromoo bakka jirtanitti waan kana dhageeysisuun dirqama seenaa tahuu qaba.